Kuxigeennada Guddoonka Golaha Shacabka oo diiday Hindisaha Xil Ka Qaadista Madaxweyne Farmaajo – Kalfadhi
Kuxigeennada Guddoomiyaha Golaha Shacabka, Cabdiwali Ibraahim Muuddey iyo Mahad Cabdalla Cawad, ayaa sharci darro ku tilmaamay go’aanka uu Guddoomiyaha Golaha Shacabka, Maxamed Mursal, ku qabtay Hindise Xil Ka Qaadis ah oo ay 92 Xildhibaan ka gudbiyeen Madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Shirjiraa’id oo ay wadajir ugu qabteen warbaahinta ayey, iyagoo jooga Muqdisho, ku sheegeen in waxa uu qabtay Mursal ay tahay dacwad siyaasadeed, “waxaana ku shaqa leh” bey yiraahdeen “Maxkamad Dastuuri ah, taas oo uusan hadda dalku lahayn”.
Guddoomiye Cawad ayaa yiri “weynu uga dignay wuuna naga diiday”. Muuddey waxa uu sheegay in Guddoomiye Mursal uu baal marayo Xeer uu Goluhu dejiyey 2017-kii, “mar uusan Mursal ahayn” buu yiri “Guddoomiyaha Golaha Shacabka”. Wixii ka dhasha qabashada waxay Xildhibaannadii gudbiyey ku sheegeen “Hindise”, isaguna ku tilmaamay “Dacwad Siyaasadeed” ayuu Muuddey sheegay inuu dusha saaranayo Guddoomiyaha Golaha Shacabka.
Waxa uu sheegay iney arrintani keeni karto inuu Goluhu kala qeybsamo, shaqeyn kari waayo, oo ay istaagaan sharci dajintii iyo kor joogteyntii uu ku hayey Hay’adaha Dowladda Federaalka Soomaaliya. Sidaas uu sheegayo “waxay qabsatay” buu yiri “Baarlamaankii 9-aad, oo shaqeysan kari waayey muddo 6 bil ah”, sida uu hadalka u dhigay.
Guddoomiye Muuddey, oo garab fadhiyey Kuxigeenkiisa, ayaa sheegay inuu la qabo Cawad inta uu sheegay oo dhan. Wuxuuse Guddoomiyaha Golaha Shacabka ku tilmaamay inuu yahay nin xanaaqsan, sida uu hadalka u dhigay. “Xanaaq Baarlamaan iyo dal laguma maamuli karo” ayuu Muuddey ku yiri wariyayaashii ka duubayey Shirka Jaraa’id. Waxa uu yiri “waxaan u soojeedineynaa inuu sharciga raaco”.
Hadalkan ayey Kuxigeennadu sheegeen wax ka yar kadib markii ay 13 Xildhibaan ku qabteen Filla Hargeysa Shirjiraa’id, oo ay ugu sheegeen warbaahinta iney, iyagoo 92 Xildhibaan ah, ka gudbiyeen Madaxweyne Farmaajo Hindise Xilka looga qaadayo, “kadib markii uu ku kacay” bey yiraahdeen “Qiyaano Qaran, Dastuurka iyo Shuruucda dalkana ku xadgudbay”, sida ay hadalka u dhigeen. Guddoomiye Mursal wali ma hadlin.